यसरी हुन्छ कतारबाट अबैधरुपमा सुन तस्कर नेपालमा – " कञ्चनजंगा News "
यसरी हुन्छ कतारबाट अबैधरुपमा सुन तस्कर नेपालमा
No Comments on यसरी हुन्छ कतारबाट अबैधरुपमा सुन तस्कर नेपालमा
एउटाले सोध्यो— तपाईँ खाली हो ? म अकमकिएँ । कस्तो खाली ? ‘तपाइँ रित्तै फर्किने हो ?’, उसले सोध्यो । मैले भनेँ, ‘यो सुटकेस छ ।’ उसले जवाफ फर्कायो, ‘त्यसो भनेको होइन । तपाईँले बाला लगाउनुभएको छ ?’ मैले भनेँ, ‘छैन ।’ उसले फेरि भन्यो, ‘त्यसो भए हामीसँग बाला छ, त्यो लगाएर जानुुहोस् ।’ यही क्रममा वार्ता अगाडि बढ्दै गयो । मसँग मुुख फोरेर कुरा गर्ने मानिसका सहयोगी तीनतिर उभिएका थिए ।
उनीहरु पनि मलाई फकाउन थाले । त्यहीक्रममा रामजी र बिनेश खनाल पनि त्यहाँ जोडिइसकेका थिए तर दीपक र नविनजी आएका थिएनन् । यसो सोचेँ, ‘उनीहरुलाई बोलाउन जान्छुु र बाहिरबाट नै स्टिङ अपरेसनको तयारी गरेर आउँछुु ।’ बाहिर गएँ । नवीनजी कसैलाई कुुर्दै हुुनुुहुुँदो रहेछ । उहाँहरुलाई यो कुरा भनेर तयारीसाथ आफू अघिअघि लागेर दीपकजीलाई भित्र ल्याएँ । त्यतिबेला रामजीले पनि भिडियो खिच्न थालिसकेका थिए । दीपकजीले खिचेको उनीहरुले थाहै पाएनन् ।
बाला लैजाऊ भन्ने समूहमा वरिपरि चार जना थिए । अर्को घेरामा चार जना थिए । भित्री घेराका चार जनामध्ये एक जना धादिङ गजुुरीबाट चितवन बसाइ गएका तामाङ थिए । अर्का एकजना मगर थिए, अनि अर्को एकजना मधेशी थिए र अर्को मान्छे को हो उसको परिचय खुुलेन भन्दै आर्थिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको छ ।
← सपुतले राईलाई खुलापत्र लेखेका छन्, यो गीत भने पैले कहिल्यै नसुनेको उल्लेख → सानो भाईहरु को आफ्नै होटेल, सानो उमेरमै यो साहस कसरी आयो,प्रेरणादयी कथा (भिडियो सहित )